Apple wuxuu bilaabaa inuu yareeyo boqolkiiba inta komishanada kujira App Store | Waxaan ka socdaa mac
Ficil ahaan sanadka oo dhan waxaan ku qarash gareynay tirinta hal-abuurnimada soo-saareyaasha shirkadda Apple ee la xiriirta arrimaha ku saabsan guddiyada ay ku soo oogto. Waa wax iska caadi ah in Apple kaliya aysan sameynin, laakiin iyadu waa kuwa bartanka u ah duufaanka oo dhan dhaleeceyn ku saabsan keli ahaanta. Hal talaabo oo ay qaaday Apple ayaa ah hoos u dhigista guddiyadaas horumarinta qaar.
Isku dayga ah in ay wax ku ridaan meeshooda, Apple waxay go'aansatay in la joogo waqtigii la yareyn lahaa xaddiga komishannada ay ku eedeeyaan horumariyeyaasha qaarkood. Sababtaas awgeed, guddiga caadiga ah ee 30% waxay hoos ugu dhacdaa kala bar kuwa biilinaya ilaa 1 milyan oo doolar sanadkii. Inta soo hartay, boqolkiiba ayaa la ilaaliyaa.
Waxay i xasuusineysaa xoogaa waxa Maamulaha guud ee Facebook uu ka dhihi jiray awooda inuu hoos u dhigo guddiyada kuwa aadka ugu baahan ugana sii badan hada cudurka safka leh. Si kastaba ha noqotee Apple wuxuu sameeyay ciyaar badh ah. Waxay hoos u dhigeysaa guddiga labadaba midka ku guuleysta $ 900.000 iyo kan ku guuleysta $ 10.000, iyadoo la ogyahay in kan dambe uu uga baahi badan yahay kii hore.
Horraantii toddobaadkan, Apple wuxuu bilaabay inuu e-maylo u diro horumariyeyaasha isagoo uga digaya isbeddelka boqolkiiba ee guddiyada isla markaana ka codsanaya u hoggaansanaantooda qorshahan cusub. Hindisaha wuxuu dhaqan gelayaa Janaayo 1, 2021, in kasta oo si wax ku ool ah, ay haddaba jiraan kuwa horumariya oo arkay in heerka hoos loo dhigay 15%.
Apple wuxuu bilaabay inuu ku dalaco 15% komishanka halkii 30%, uguyaraan @Nikola_App.
Waxay umuuqataa gebi ahaanba macquul inay doonayaan inay bilaabaan inay soo saaraan maalmo yar kahor si rasmi ah.
Ma ogin sidee ayuu go'aankan u saameyn doonaa xukunka aad gacantaada ku hayso Ciyaaraha Epic iyo haddii ay u adeegsan doonto dhaqdhaqaaqan maxkamadda.
Haddii aad rabto ama aad u baahan tahay inaad wax ka ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mawduucan, ama aad xiisaynayso inaad tahay horumariye yar, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad gasho boggan Sarkaalka Apple halka ay ku sharxayaan faahfaahin dheeraad ah waxaadna awoodi doontaa inaad isdiiwaangaliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple wuxuu bilaabaa inuu yareeyo boqolleyda guddiyada App Store
Naqshadeynta WaterField waxay horey u laheyd kiis AirPods Max
Mustaqbalka AirPods waxaa lagu xakameyn karaa qeybaha kala duwan ee jirka